Sanduuqa Dhismaha & Farsamada - Pandawill Technology Co., Ltd.
Marka lagu daro shirarka guddiga wareegga daabacan (PCBA), waxaan bixinnaa sanduuqa isku-dhafka isku-dhafka ee isku-dhafan ee nidaamyada hoose iyo modules iyo sidoo kale is-dhexgalka wax soo saarka buuxa. Iyada oo loo marayo shabakadeena alaab-qeybiyeyaasha doorbidaya, annaga, shirkadda Asteelflash EMS, waxaan kaa taageereynaa A ilaa Z, laga soo xigtay oraahda illaa heerka wax soo saar ballaaran ee mashruucaaga.
Dhammaan adeegyada ka hooseeya hal saqaf, kooxaha adeegga badeecadaada, ayaa ah maaddooyinka ugu muhiimsan ee suuqyada si suuq-geyn ah looga geli karo.
Markaan ka gudubno PCBA, waxaan bixinaa sanduuqa dhismaha isku-dhafka iyo isku-dubbaridka adoo dejinaya khadadka isku-dhafka macaamiisha ee u heellan.
Waxaan diiradda saareynaa horumarka joogtada ah, waxaan ballanqaadeynaa inaan marwalba wanaajinno oo aan hagaajino geeddi-socodka shirarka, taas oo ka dhigeysa mid waxtar badan u leh macaamiisheenna sidaas darteedna ay ugu tartamayaan suuqyadooda. Iyada oo adeegyadeena wax soo saarka elektaroonigga ah ee heer sare ah, meelaha wax soo saarka iyo kooxaha wax soo saarka u heellan, loo tababaray heer sare si ay u qabtaan isku imaatinka sanduuqa dhismaha ee heerka ugu sarreeya ee tayada leh, waxaan ballanqaadeynaa inaan ku taageerno koritaanka iyo xoojinta mowqifkaaga suuqa, sida kordhinta kooxdaada .
Maaddaama aan nahay shirkad soo saarta qandaraas elektiroonig ah, waxaan higsaneynaa inaan u keenno macmiilkeenna heer sare.
Waxaan aaminsanahay koox iyo qaab wada shaqeyn, taageerida wax soo saarkaaga heerka naqshadeynta laakiin sidoo kale dhamaadka nolosha badeecadaada, ka shaqeynta keenida jiilka cusub nolosha. Asteelflash, Adeeggaaga Soo-saarista Elektaroonigga ah (EMS) ee shuraakada ku ah injineernimada iyo adeegyada wax soo saarka, laga bilaabo A ilaa Z.
Xalalkeena wax soo saarka elektarooniga ah ee Box Build:
• Isku-dhafka korantada iyo farsamada
• Dahaarka qaabdhismeedka
• Tijaabinta shaqada